Deals in Decorators | Myanmar Builders Guide - Best Building and Construction guide in myanmar
Deals in Decorators
Offered by Lin Thura (Aung San)
၁။ေရညိႇမတက္ျခင္း၊ ၂။အေရာက္မကၽြတ္ျခင္း၊ ၃။ကားတန္(၃၀)ထိ ခံႏိုင္ရည္႐ိွျခင္း၊ ၄။အၾကမ္းသံုး၊အေခ်ာသံုး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသံုးႏိုင္ျခင္း။
Offered by D Mart Co., Ltd.
Steel Scaffolding (Rental & Installation)
Our Company Provide Scaffolding Installation and rental in the construction sectors. All the scaffolding are Taiwan made, which are safety, high quality and guarantee. Welcome to contact us at the phone number as below.
Offered by Hein
မိမိ နေအိမ် ၊ ရုံးခန်း ၊ ဆိုင်ခန်းများ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစေခြင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း။
Offered by LED WORLD
အတောက်ပဆုံး၊ အလင်းလက်ဆုံး သင့်အဆောက်အဦးမှာ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် အမှောင်ထုကြီးစိုးနေတဲ့ ညဉ့်နက်ချိန်မှာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ကို ဥက္ကာပျံခဲကြီးကျလာသလား ထင်မှတ်သွားရလောက်အောင် သင့်အိမ်၊ သင့်ဟိုတယ်၊ သင်နေထိုင်ရာ အဆောက်အအုံကနေ တောက်ပ လင်းလက်တဲ့ ရောင်ခြည်တွေ ဖြာထွက်ပြန
Offered by Myanmar Uni Steel Trading Co.,Ltd.
စတီးဝရန်တာ လက်ရန်းအလှဆင် စတီးပြား
စတီးအလှဆင်ပြာ ကို ခေတ်မှီဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဝရန်တာ လှေကားလက်ရန်းတွေ မှာ အလှဆင် နိုင်ပါသည်။ သံချေးလုံးဝမတက် အထူးအာမခံပါသည် ။ အရန်အတွေကောင်းမွန်း သော စတီအလှဆက်ပြား များကို အသုံးပြုပြီး မိမိအိမ်ကိုအလှဆင်ကြပါ
Offered by Golden Modern
"Laminated Floor AC4 12mm ကြမ်းခင်း (Vinly ပါကေး) ကိုရီးယားပါကေး အခန်းတွင်းအလှဆင် မျက်နှာကျက်များ"
Offered by Wan Thar Myanmar
"နံရံမှာ ကပ်ဖို့လား ကြမ်းခင်းဖို့လား လှေကားအတက်အဆင်း သုံးဖို့လား အိမ်ဝင်းထဲ ခင်းဖို့လား ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုအား 0.1% ပဲရှိတာမို့ အကြမ်းခံ အသုံးခံ ကြာရှည်ခံတဲ့ ပါကေး ကိုဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။ Stratus Memphis အစရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ပါကေးအမျိုးအစားများဖြစ်တ
Offered by BHI
မိတ်ဆွေတို့နေအိမ်တွင် ကိန်းဝပ် စံပယ်တော်မူသော ဘုရားဆင်းတုတော်များ | ဘုရားပုလ္လင် ကျောင်းဆောင်တော်များကို ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းဖြင့် သစ်လွင်တောက်ပစေရန် 24 k အခေါက်ရွှေအဆင်းရှိတဲ့ အလင်းအမှောင်ပေါ်တွင် အရောင်မပြောင်း မဲသွားခြင်းမရှိပဲ လင်းအားကောင်းပြီး အိည
အိမ်တစ်လုံးရဲ့ ခမ်းနားမှုအတွက် ထူးခြားလှပပြီးကခတ်မီတဲ့ နံရံကပ်မီးများ IT ခေတ်ကြီးမှာ Smart Lighting တွေအသုံးပြုပြီး Smart ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေထိုင်ပါ. လူကြီးမင်းတို့ အိမ်ရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါမှု လူကြီးမင်းတို့ ဆိုင်ရဲ့ လှပဆန်းကျယ်မှု လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်ရဲ့
Natural Wood Oil (သစ်သားအလှဆင် ပရိဘောဂ သန့်စင်ရည်)
"အိမ်တွင်း အလှဆင်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေ ဖုန်အညစ်ကြေးတွေတက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့အတွက် … ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းခြောက်ခံပြီး စဉ်းစားနေရပါသလား ၊ ဒီအတွက်တော့ .. မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ညစ်မခံပါနဲ့ ️တစ်မျိုးတည်းသုံးရုံနဲ့တင် “ အိုကေမယ့် ” BHI
Offered by Mya Shwe Wah Htun
တံခါးမကြီး ပြတင်းပေါက်တို့ မတက်မှီ ကြီးခွေကို အရင်းဦးဆုံး တပ်ဆင်ရပါသည်။ အမျိုးအစား size မျိုးစုံ မိမိစိတ်တိုင်းကျ မှာယူနိုင်ပါသည်။